Naya Post Nepal | य’त्रो दिन बि’तिसक्दा पनि अझै प’त्ता लागेन अर्जुन दाशको ह”त्यारा ? अझै पनि प’त्ता नलाग्नुको का’रण के त ? (भिडियो सहित हेर्नुस )
य’त्रो दिन बि’तिसक्दा पनि अझै प’त्ता लागेन अर्जुन दाशको ह”त्यारा ? अझै पनि प’त्ता नलाग्नुको का’रण के त ? (भिडियो सहित हेर्नुस )
काठमान्डौ- घ’टना भएको यत्रो दिन हुँदा सम्म पनि मुख्य आ’रोपित प्र’काउ नपर्नाले आम जनमानसमा नि’रासा पन छाउन था’लेको छ , दास ह’त्या प्र’करणमा को हुन त मुख्य अ’भियुक्त भन्ने नै अहिले स म्म पत्ता लागेको भने छैन प्र’हरिले भने यो घ’टना लाई सुस्म ढङ्ग बा ट अ’नुसन्धान गरिरहेको छ , घ’टना हो कैलालीको जानकी गाउँपा लिका वडा नम्बर ९ का २५ वर्षीय अरुण दासको श’व सामुदायिक बनमा फे’ला परेको थियो ।
तेस्तै- कैलाली जिल्ला जानकी नगरपालिका ९ मा २५ वर्षका युवा अर्जुन दाशको घाँ’टी का’टेर ह’त्या भएको थियो । घर न’जिकैको जं ‘गलमा रुखमा बा’धिएको अवस्थामा उनको श’व फे’ला परेको थियो । उनको श’रीर रुखमा बाधिएको अ’वस्थामा भे’टिएको थियो भने घा’टिमा धा’रिलो हति’यार प्रयोग गरि टा’उको छि’नाएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीयहरुले मिडियामा जानकारी दिएका छन ।
उनको श’रीरका कपडाहरु पनि खोलिएको अवस्थामा भेटिएको स्था नियहरुले ब’ताएका थिए । उक्त घ’ट”ना अहिले नि’कै च’र्चामा रहे को छ । घ’ट’ना भएको केही समय पछि अर्जुनकी श्रीमतिलाई मनो ज भण्डारी भन्ने ब्यक्तिले फोन गरि उक्त घ’ट’ना आफुले घ’टाएको भनी जानकारी दिएका थिए । अहिले मनोज र उनका साथिहरु बोले को अडियो रेकर्ड बाहिरिएको छ ।
अडियोमा आफुहरुले घाँ’टी र शरी’र अ’लग गरिदिएर आफुहरु भा गिसकेको बताएका छन । मनोजले दाइ भनी सम्बोधन गर्ने एक ब्या क्तिलाई आफुहरुले उक्त घ’टना घटा’एको बताएका छन ।जसमा ब म्बै भन्ने ब्याक्तिलाई कसैले केही गरे उस्लाई पनि मा’र्ने ध”म्की दिए को सुनिन्छ ।
बक्स उठाउने मान्छेलाई आफुहरुले मा’रे”को उनिहरुको अ”डि’यो रेकर्डमा सुनिन्छ । उक्त बक्समा के थियो र उनिहरु बिच के वि’वाद थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । उनिहरुको कुराकानी सुन्दा सुमित नाम गरेको ब्याक्तिसगँ अर्जुन लगायतको झ’ग’डा भएको जस्तो बु झिएको छ । उनीहरुको कुराकानी सुन्दा ह’त्या भएका अर्जुन पनि पहिले देखि नै झ’गडामा सामेल भएको बु’झ्न सकिन्छ ।
उनिहरुले कुरा गरेको बक्सको बारेमा अर्जुनकी श्रीमतिले यस अघि ब’ताएकी थिइन । ह’त्या भएको रात मनोज लगायत अन्य केही ब्या क्ती घरमा आएर मोबाइल र एउटा एटेजी झोला खोजेको उनले बता एकी थिइन । अहिले उनिहरुले कुरा गरेको बक्स त्यही हो कि भन्ने बु’झ्न सकिन्छ । उक्त बक्समा के थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । तर बि’बाद र ह’त्या हुनुको का’रण त्यही ब’क्स नै रहेको बुझिन्छ ।
प्रहरिले त्यसबारे पनि अनुसन्धान भै रहेको ब’ताएको छ । आ’रोपि तहरु प’क्राउ भएसी सबै कुरा बा’हिर आउने प्र’हरिको भनाई छ। कै लाली प्रदेश सभाका स’दस्य रतन थापाले कैलालिमा अपराधीक घ’ टना ब’ढिरहेको बताए । केही समय अघि भुपेन्द्रको पनि ह’त्या भए को थियो । आफुहरुले अहिले प्रहरीसगँ छलफल गरि यस्ता घ’टना हुन नदिन प्रहरीलाई सक्रिय भएर लाग्न अनुरोध गरेको बताए ।
अर्जुनको ह’त्यामा संलग्नको पहिचन भै सकेको र केही ब्यक्ती निग रानिमा रहेको प्र’हरिले बताएको थापाको भनाई छ । घ’टनामा संल ग्न एक जना प’क्राउ परेको जानकारी प्रहरिले आफुलाई दिएको उन को भनाई छ । तर प’क्राउ पर्नेको नाम खु’लाईएको छैन । प’क्राउ प रेको ब्यक्ती मा’र्फत अन्यलाई पनि छिटै प’क्राउ गर्ने प्र’हरिले ज’नाए को छ ।
२०७८ पुष २४, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 95 Views